allsanaag.com - Maamulka wuu Debcay Xaalkuna Ma Fiicna
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3204	Days	09	Hours	30	Minutes	03	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Maamulka wuu Debcay Xaalkuna Ma Fiicna
Written by Shanle	Allsanaag: Wareysi Faysal Cali Waraabe uu siiyay Hadhwanaag, ayuu ku sheegay in maamulka Hargeysa uu debcay awgeed ay keentay in nabadgalyaduna debacday. Wuxuu eedeeyay maamulka hadeer jira, isagoona sheegay in maamulka hadeer jira uu burburiyay hay’adii sirdoonka. Wuxuuna kaloo yiri maamulkii hore ee Riyaale ayaa wanaagsanaa marka kan hadeer loo eego. Faysal Waraabe ayaa sheegay in arrimo badan ay iska badaleen maamulka Hargeysa wuxuuna tusaale u soo qaatay qodobadan:
Baarlamaanka ma shaqeynayo,
Siyaasadii dibadda waan ka baxney,
Waa lakala jabjabey,
Qabyaaladii baa xoogeesatay,
Maamulkii Hargeysa ayaa qiil qiil ku jira,
Cadawgeenii ayaa soo toosay.
Dhinaca kale, mar uu ka hadlayey shirka kadhici doona Ingiriiska ayuu ku sheegay in shirkii hore ee Iniriiska ka dhacay iyo kan bisha May dhicidoona ay kala duwan yihiin. Faysal ayaa sheegayi in kii horre lagu wada hadalsiinayay Soomaaliya iyo Maamulka Hargeysa, laakiin kan hadeer in dhaqaalo loogu uriiranayo Soomaaliya, oo wadamada ka soo qeybgalyaana ay u arkaan in Soomaali weyn oo wadajirta wax loo qabanayo. Wuxuuse sheegay in marka shirka dhamaado in iyaga oo maamul goboleed oo kale ah in inta meel la fariisiyo markaa lala hadli doono.
Dadka ku abtirsada Maamulka Hargeysa ayaa iyagu wax aqoonsi ah aan caalamka ka helin waayoo ah caalamka waxey rumeysan yihiin in Soomaalya horay loo kala goo’gooyay. Hase ahaatee, waxaa ayaan dara ah in siyaasadaha aduunka isbadalaysa awgeed in dadkani ay jahwariirinayaan dad aan wax maslaxad ah aan dadka u hayn iyagoo ku wareeriyay aqoonsi mar hore dhintay. “Bartii yaqaan barri uma korodho” oo ah qof meel uun ku dhagan in aysan waxba u soo siyaadeen. Waxaase haboon in dadka ku abtirsada Maamulka Hargeysa iney Soomaaliya ka qeeb qaataan oo dabadeedna la siiyo Madaxweynaha iyo Caasimada Soomaliya. Tan in la isdilay ah, Soomaali oo dhan ayaa is dishay marka “Dadkiina dhinac ka raaca oo yaan la idinka tegin.”